Alahady 19/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (Jer 23, 1-6 )
Loza ho an’ny mpiandry manary sy manahaka ny ondry eo amin’ny kijanako, – teny marin’ny Tompo. Koa izao no lazain’ny Tompo, Andriamanitr’i Israely, ny amin’ireo mpiandry miandry ny vahoakako: Ny ondriko dia nahahakareo, naronjindronjinareo; tsy niahy azy ireo ianareo. Koa indro Aho kosa mba hiahy, hamelezako anareo, ny haratsian’ny nataonareo, – teny marin’ny Tompo. Ary Izaho dia hanangona izay sisa amin’ny ondriko, avy eny amin’ny tany rehetra nandroahako azy, dia haveriko ho eo amin’ny kijanany izy; ka hitombo sy hihamaro. Ary hanangana mpiandry izay hiandry azy Aho; ka tsy hatahotra na vadipo intsony izy; sady tsy hisy diso tsy eo, na dia iray aza, – teny marin’ny Tompo. Indro avy ny andro, – teny marin’ny Tompo, hananganako solofo marina ho an’i Davida; hitondra tahaka ny mpanjaka, ho hendry, hanao ny hitsiny sy ny rariny amin’ny tany. Amin’ny androny, i Jodà hovonjena; i IsraeIy handry fehizay; ary izao no anarana hanononana azy: “Tompo fahamarinantsika”.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 2, 13-18)
Ry kristianina havana, ankehitriny, ao amin’i Kristy Jesoa, ianareo izay lavitra fahiny, dia tongan’ny Ran’i Kristy akaiky. Fa Izy no nahatonga antsika roa tonta ho iray, Izy no nandrava ny efitry ny fisarahana amam-pifandrafesana; tao amin’ny nofony no nanafoanany ny Lalàna be didy aman-pitsipika, mba hanakambanany antsika roa tonta ho olom-baovao iray ao amin’ny Tenany; fa nampihavaniny sy nakambany isika roa tonta, ho tena iray amin’Andriamanitra, noho ny Hazofijaliana izay nandevonany ny fifandrafesana. Ary tonga Izy, nitory fihavanana taminareo izay lavitra, sy nitory fihavanana tamin’ireo izay akaiky koa, satria aminy no ahazoantsika roa tonta manatona ny Ray ao amin’ny Fanahy iray ihany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 30-34)
Tamin’izanyandro izany, nony niverina teo amin’i Jesoa ny Apôstôly, dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy Izy tarniny: “Avia ianareo, ndeha mitokana any amin’ny tany mangingina, ka mialà sasatra kely” ; fa maro ny olona nifamoivoy ka tsy nisy hihinanany akory. Dia niara-niondrana an-tsambo kely izy ireo ka lasa nitokana any amin’ny tany mangingina. Fa hitan’ny olona ny nandehanany ary maro no nahalala ny halehany, ka nidodododo nandeha an-tongotra avy amin’ny tanàna rehetra, sy tonga tany talohany. Ary nony nivoaka avy tao an-tsambo i Jesoa dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy mana-mpiandry izy ireo, dia nampianatra azy zavatra maro Izy.
Alahady fahaefatra Karemy – 30/03/2014 – Tenin’Andriamanitra